Topnepalnews.com | फेरिँदैछ एमाले रणनीति : माओवादीसँग तालमेलको बहस
फेरिँदैछ एमाले रणनीति : माओवादीसँग तालमेलको बहस
Posted on: September 21, 2017 | views: 594
काठमाडौं । स्थानीय तहको चुनाव सुरु हुनुअघि एमाले नेताहरुले माओवादीलाई निकै कमजोर आँकेका थिए । माओवादीलाई कुनै मतलव नगरे पनि एमाले एक्लै नेपाली राजनीतिको मियो बन्न सक्छ भन्ने सो पार्टीका नेताहरुको बुझाइ थियो ।
तर, तीन चरणमा स्थानीय तहको चुनाव सकिने बेलासम्म आइपुग्दा एमाले नेताहरुको निश्कर्ष गलत सावित भयो । माओवादी सानै भए पनि तेस्रो शक्तिका रुपमा देखा परेको र उसलाई साथ लिएर नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सत्ता सुरक्षित गरेको स्थितिप्रति अहिले एमाले नेताहरु चुक्चुकाउन थालेका छन् ।
दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि एमालेले अनौपचारिक समीक्षाका क्रममा कांग्रेस माओवादी तालमेलका कारण कम्तिमा ४० स्थानीय तहमा पराजय भोग्नुपरेको निष्कर्ष निकाल्यो ।
माओवादी किन आवश्यक ?
आगामी दुबै चुनावमा एमाले र कांग्रेसमध्येबाटै पहिलो र दोस्रो दल हुनेमा कुनै आशंका छैन । तर, माओवादीको अहिले जुन पोजिनश देखिएको छ, उसले धेरै प्रदेशमा कसको सरकार बनाउने भन्ने चाबी हातमा लिनेछ । कम्तिमा ५ वर्षका लागि देश हाँक्न कांग्रेस र एमाले दुवैका लागि माओवादीको साथ आवश्यक देखिन्छ ।
माओवादीको बढ्दो शक्तिले के देखाएको छ भने आगामी चुनावमा या चुनावपछाडि सुरु हुने सरकार गठन प्रक्रियामा कांग्रेस वा एमालेमध्ये जसले माओवादीको साथ लिन्छ, उसैले सरकारको चाबी आफ्नो हातमा पार्नेछ । प्रदेश सभा र केन्द्रीय सभा दुबैमा माओवादीको आवश्यकता कांग्रेस वा एमालेलाई पर्ने देखिन्छ । केन्द्र र प्रदेशको सरकार गठनमा मात्रै होइन, राष्ट्रियसभादेखि लिएर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा समेत माओवादी निर्णायक शक्ति हुन सक्छ । त्यसैले माओवादीसँगको तालमेल कांग्रेस र एमाले दुवैका लागि बाध्यात्मक आवश्यकता हो ।
माओवादीलाई उपेक्षा गर्दा एमालेलाई घाटा
पहिलो चरणको चुनावसम्म एमाले नेताहरुले माओवादीलाई कुनै हैसियत बोकेको दलकै रुपमा देखेनन् । दोस्रो चरणको स्थानीय चुनावपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेललगायतका नेताहरुले कांग्रेससँगको तालमेलले माओवादी सिद्धिने भन्दै आफूसँग तालमेल गरे उसको अस्थित्व रक्षा हुने सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिए ।
तर, माओवादीले कांग्रेससँग मिलेर एमालेलाई खुम्च्याउन र आफूलाई तेस्रो शक्तिका रुपमा कायम राख्न दोस्रो चरणको चुनावमा निकै ठूलो भूमिका खेल्यो । कांग्रेससँग नजिकिँदा माओवादीलाई हैन, एमालेलाई चाहिँ घाटा भयो ।
झापा, मोरङल गायतका कतिपय ठाउँमा माओवादीले एमाले हराउनकै लागि कांग्रेसलाई भोट हालेका कारण एक दर्जन बढी स्थानीय तहमा हारिएको एमालेले समीक्षा गरेको छ ।
पहिलो चरणको निर्वाचनको तुलनामा दोस्रो चरणमा कांग्रेस र माओवादीबीच देशव्यापी संगठित तालमेल भएको थियो । एमाले २ नम्बर प्रदेशमा पनि कांग्रेस माओवादी तालमेल हुने र राजमार्ग क्षेत्रका कम्तिमा १० नगरपालिका गुमाउनुपने त्रासमा थियो । तथापि अन्तिममा कांग्रेस माओवादीवीच उल्लेख्य तालमेल नभएपछि एमालेले राहतको सास फेर्‍यो ।
तर, तेस्रो चरणको मतगणनाको परिणाम पनि मिश्रति प्रकारकै आउने संकेत देखिइसकेको छ । मधेसमा माओवादी र संघीय फोरम एमालेकै हाराहारीमा आउन लागेको संकेत देखिँदैछ । यो संकेत कांग्रेसका लागि मात्रै होइन, एमालेका लागिसमेत निकै जोखिमपूर्ण छ ।
शायद यही जोखिमको पूर्वाभाष भएरै हुनुपर्छ, एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आउने सबै चुनावमा बामपन्थी गठबन्धन बन्नुपर्ने बहस अनलाइनखबरबाटै खुलासा गरिसकेका छन् ।
फेरि फकाउने प्रयास
एमालेलाई हराउन आगामी संसदीय चुनावमा कम्तिमा ५० ठाउँमा माओवादीसँग तालमेल गर्ने प्रयास कांग्रेसले गरिरहेको भन्दै एमाले तरंगित भएको छ । एमालेका शीर्ष नेताहरु नै माओवादीलाई कांग्रेसको पोल्टामा जान दिन नहुने भन्दै अनौपचारिकरुपमा माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरुसँग छलफलमा छन् ।
एमालेका एक पदाधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने-केपी ओलीले प्रधानमन्त्री नछाड्ने भए भनेर प्रचण्ड बिच्किँदा आज माओवादी कांग्रेसको सहायक संगठन जस्तो बन्न पुग्यो । यदि ५० ठाउँमा कांग्रेस र माओवादी मिले भने केन्द्रीय सरकारमा मात्र होइन, प्रदेश सरकारमा समेत एमालेलाई गाह्रो पार्छन् । त्यसैले अब माओवादीलाई कांग्रेसबाट फुत्काउन हामीले हामीभित्रको दम्भ त्याग्नैपर्छ ।’
मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण आगामी चुनावमा अधिकांश प्रदेशमा कुनै पनि दलको बहुमत नपुग्ने प्रष्ट छ । त्यो अवस्थामा कांग्रेस र एमालेमध्ये जसले माओवादीको सहयोग लिन्छ, उसैले सरकार बनाउने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले अहिलेदेखि नै माओवादीलाई कांग्रेससँग भन्दा आफूसँगको तालमेलमा आकषिर्त गर्नुपर्छ भन्ने मत एमालेमा प्रकट हुन थालेको छ ।
‘हामी मूलतः एक्लै चुनाव जित्छौं । कांग्रेस र माओवादी मिल्दा पनि एमालेले जित्छ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । तर, पनि माओवादीको बुद्धि फिर्‍यो भने उसले एमालेसँग तालमेल गर्नुपर्छ’ एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले अनलाइनखबरसँग भने ‘कांग्रेससँगको तालमेलबाट अन्ततः माओवादी सिद्धिने हो, अप्राकृतिक गठबन्धन छाडेर माओवादीले समीक्षा गरोस् ।’
६०/४० को अनौपचारिक बहस !
एमालेका केही नेताहरु बिगतका तिक्ततता मेटाउँदै माओवादीलाई कांग्रेससँग टाँसिन नदिन अनौपचारिक छलफलमा जुटेका छन् । केन्द्र र प्रदेश सरकार बनाउने सन्दर्भमा माओवादीले ल्याउने सिट निर्णायक हुन सक्ने भएकाले माओवादीलाई कांग्रेसतिर धकेल्न नहुने उनीहरुको तर्क छ ।
एमालेका लागि तीन दल एक्लाएक्लै लड्दा फाइदा छ, यदि त्यसो नभएमा कतिपय ठाउँमा माओवादीसँग तालमेल गरेर कांग्रेस हराउनु उसका लागि लाभदायक हुने भएकाले केही एमाले नेताहरु माओवादीसँग संवादमा लागेका हुन् ।
यही निश्कर्षका साथ केही एमाले नेताहरुले आगामी चुनावमा माओवादीसँग ६०/४० को भागवण्डा गरेर भए पनि तालमेलमा जानुपर्ने बताउन थालेका छन् ।
प्रदेश नम्बर २ मा आम रुपमा दलहरु एक्लाएक्लै चुनाव लडिरहँदा यो प्रश्न पनि उठेकै हो- के अब प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि मुख्य दलहरु आ-आफ्नै बुँतामा लड्छन् ? तर, मतगणनासम्म आइपुग्दा दुई नम्बर प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेलाई माओवादी र मधेस केन्दि्रत दलहरुले चुनौती दिएको प्रष्टै देखिएको छ ।
यो चुनौतीलाई हेर्दाखेरि दलहरु एक्लाएक्लै चुनाव लडे नै भने पनि चुनावपछि सरकार गठन गर्ने बेलामा चाहिँ कांग्रेस र एमाले दुबैलाई माओवादी र मधेसवादीको सहयोगको अपरिहार्यता बढेकै छ ।
माओवादी कोसँग नजिक ?
माओवादीले अबको चुनावमा कांग्रेस वा एमालेमध्ये कसलाई रोज्ला ? हामीले यो प्रश्न माओवादीका प्रभावशाली नेता शक्ति बस्नेतसँग गर्दा उनी गृहजिल्ला जाजरकोटमा रहेछन् । बस्नेतले यो प्रश्नमै आपत्ति जनाउँदै उल्टो प्रतिप्रश्न गरे- ‘के माओवादी तालमेलबिना बाँच्नै नसक्ने र जित्नै नसक्ने पार्टी हो ?’
कांग्रेससँग पार्टी एकता नै गर्ने जसरी तालमेलका लागि मरिहत्ते गरेकोमा शक्ति बस्नेत, टोपबहादुर रायमाझीहरु सन्तुष्ट छैनन् । त्यसको संकेत हो बस्नेतको यो प्रश्न । उनले माओवादी पार्टी एक्लै चुनाव लडेर जित्ने सामथ्र्य राख्ने भएकाले अनावश्यक रुपमा कांग्रेस वा एमालेतिर लहसिनु लज्जास्पद रहेको बताए ।
बस्नेतले भने- ‘माओवादीको अलग पहिचान छ । हाम्रो आफ्नै अस्थित्व छ । ०६४ को ठूलो पार्टी हो । हामी आमरुपमा आफ्नै बुँतामा चुनाव लड्नुपर्छ । कहीँकतै स्थानीय आवश्यकताका आधारमा एमाले वा कांग्रेससँग तालमेल गर्न सकिन्छ । तर, केन्द्रबाटै ६० र ४० भनेर जानु भनेको हामी सिद्धिने बाटो हो ।’
कांग्रेससँग केन्द्रीयस्तरबाटै चुनावी तालमेल गर्ने कुरामा माओवादीमा एकमत देखिन्न । टोपबहादुर रायमाझीले ५ नम्बर प्रदेशका लुम्बिनी क्षेत्रमा जित्नका लागि एमालेसँग तालमेल गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । स्रोतका अनुसार उनी एमालेका उपमहासचिव बिष्णु पौडेलसँगको संवादमा छन् ।
एमालेले पनि ५ नम्बर प्रदेशका तराईका जिल्लामा माओवादीसँग मिल्दा फाइदा हुने देखेर सम्वाद चलाएको स्रोत बताउँछ ।
एमाले सचिव योगेश भट्टराईले आइतवार सार्वजनिक मञ्चबाटै माओवादी अन्ततः एमालेसँगै तालमेलमा आउनुपर्ने बताएका छन् ।
तर, यी सबै घटनाक्रमका बाबजुद माओवादीको मूल नेतृत्व एमालेसँग नजिक हुन खासै इच्छुक देखिँदैन । नेताका भाषणदेखि कार्यकर्ताका सामाजिक सञ्जालका वाकयुद्ध सुन्दा र हेर्दा यी दुई दलबीच सहकार्यको जमिन तत्कालै देखिँदैन ।
बिग्रँदो कांग्रेस-माओवादी सम्बन्ध
एमाले नेताहरुले आफूलाई असाध्यै हेप्ने गरेको, खसालेर बोल्ने गरेको र तालमेलको सहमति गरिए पनि वीचमा धोका दिने गरेको माओवादी नेताहरुको गुनासो छ । कांग्रेससँग मिल्दाखेरि यस्तो समस्या नआएको र एमालेको सेखी झार्न पाइएको भन्दै उनीहरु सन्तुष्ट देखिन्छन् ।
कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिको भनाइलाई मान्ने हो भने प्रदेश नम्बर २ बाट पाठ सिकेर आगामी दुबै चुनावमा कांग्रेस र माओवादीबीच केन्द्रबाटै ‘प्याकेज तालमेल’ को प्रयास हुनेछ ।
कांग्रेसमा देउवा र निधी दुबै नेताहरु एमालेलाई हराउन र चुनावपछि पनि सरकारमा पुग्नकै लागि भए पनि माओवादीलाई आगामी चुनावमा साथमा लिएर जाने पक्षमा छन् ।
तर, रामचन्द्र पौडेल पक्ष माओवादीसँगको तालमेलबाट कांग्रेसलाई फाइदा नभएको निष्कर्षमा पुगेको सूत्रहरुको कथन छ । पौडेल पक्षका कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइराला कांग्रेसकै कारण माओवादीले स्थानीय तह चुनावमा अहिलेको आकार पाएको दाबी गर्छन् । उनले अनलाइनखबरसँग भने- माओवादीलाई कांग्रेसको तालमेलबाट फाइदा भएको छ । तर, माओवादीसँगको तालमेल कांग्रेसका लागि फाइदाजनक भएन, त्यसैले हामी आफ्नै बलमा चुनाव लड्नुपर्छ भन्नेमा छौं ।
तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चाहना गर्दैमा मात्रै माओवादी पार्टीले ऊसँग दीर्घकालीन सहकार्य गरिरहन्छ भनेर अनुमान लगाउन चाहिँ सकिँदैन ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड चतुर राजनीतिक खेलाडी हुन् । अहिले देउवा नेतृत्वको सरकारले जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउनेदेखि लिएर विभिन्न अलोकप्रिय निर्णयहरु गरिरहेको प्रचण्डलाई चित्त बुझेको छैन । त्यसैगरी भारतमा गएर संविधानका बारेमा देउवाले दिएको अभिव्यक्तिको त प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमै विरोध गरिसकेका छन् ।
एकातिर शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीप्रति प्रचण्ड असन्तुष्ट बन्दै गइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ पार्टीका बरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले कांग्रेससँग हैन, वामपन्थी र राष्ट्रवादी शक्तिहरुसँग दीर्घकालीन तालमेल गरेर अघि बढ्नुपर्ने लविङ माओवादीभित्र निरन्तर गरिरहेका छन् ।
यी सबै घटनाक्रमले के देखाउँछन् भने देउवा सरकारले गर्ने सबैखाले अलोकपि्रय निर्णयको साक्षी बसिरहन माओवादी पार्टी सधैं तयार नहुन सक्छ । आगामी चुनावपछि बन्ने सरकारमा पनि देउवाले यस्तैखाले अलोकपि्रय निर्णय गर्ने हुन् कि भन्ने डर माओवादी नेताहरुमा पलाउन थालिसकेको छ । यो अवस्थामा माओवादीले आगामी चुनाव अगाडि वा पछाडि काँध नफेर्ला भन्न सकिँदैन ।
सरकारमा माओवादीले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेता पनि कांग्रेसले स्थानीय तहको चुनावमा माओवादीको माओवादीलाई हेप्ने काम गरेका माओवादी नेताहरुमा पर्न थालेको छ । विशेष गरी मधेसको चुनावमा कांग्रेसले माओवादीलाई कम आँकेको नेताहरुको बुझाइ छ ।आगामी चुनावपछि तेस्रो दलको हातमा सरकार गठनको तालाचाबी आयो भने त्यसबेला प्रचण्ड आफैंले सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव नल्याउलान् भन्न सकिँदैन ।
उता भरतपुर महानगरको कार्यपालिका गठनका बेलामा कांग्रेसले धोका दिएको माओवादी नेताको गुनासो छ ।
रोचक त के छ भने मोरङ जिससमा कांग्रेसको जितको सम्भावना हुँदाहुँदै त्यहाँ माओवादीले एमालेसँग मिलेर कांग्रेसलाई हराइदिएको छ । कांग्रेसमा दम्भ देखिएको भन्दै मोरङका माओवादीहरुले कांग्रेसलाई हराएर एमालेलाई सघाएका छन् । र, आगामी प्रदेशसभा र केन्द्रको चुनावमा पनि मोरङका माओवादी नेताहरुले एमालेसँग तालमेलका लागि छलफल चलाउन थालिसकेको स्रोतले बतायो ।